crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> UNHCR: Ma fududa dib-u-celinta qaxootiga | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka October 17, 2015	0 285 Views
Shibis, Muqdusho – In ku dhow 5,000 oo qaxooti ah ayaa kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab halka 4500 oo kale oo xerada wali ku sugan ay balan-qaadeen inay ku laaban doonaan dalkii hooyo ee Soomaaliya.
Hey’adda qaxootiga ee UNHCR ayaa ku caawisay celinta qaxootiga iyada oo geyneysa magaalooyinka ay kasoo kala jeedaan sida Muqdisho, Kismaayo, Beydhabo, Luuq iyo bartamaha Soomaaliya.
Waxaa kale oo lasiiyay lacago kaash ah iyo agabyada muhiimka u ah aasaaska guriga si ay nolol cusub ugu bilowdaan sida uu war-fidiyeenka ugu sheegay magaalada Geneva af-hayeenka UNHCR Adrian Edward.
Jeer iyo haddana, UNHCR waxay tilmaantay inay jiraan ku dhawaad 26,000 oo qaxooti Soomaali ah kuwaas oo kasoo qaxay dalka Yemen kuna soo laabtay dalka gaar ahaan Muqdisho.
Balse si loosoo celiyo qaxootiga Dhadhaab, UNHCR waxay cod dheer ku sheegtay inay tahay howl-gal aan fududeyn dhameyntiisa; loona baahan yahay kaalmo dheeraad ah oo lagu bixiyo dib-u-celinta qaxooti kasta oo doonaya inuu dalkiisa ku laabto.
“Daganaanshiyaha dalka waa doorka ugu weyn si loogu xaqiijiyo ku celinta dhulkooda,”ayuu yiri Edward. “Halka amnigu wali fudud yahay–shaqa la’aanta iyo waxbarashaduna ay adag tahay–in la hubsado gebigood oo wada laabtay waa riyo adag oo sugeysa in la rumeeyo.”
Previous: Waanada Jaceylka
Next: Mandheera: gabar umushay xilli ay ku jirtay imtixaan